UCluny MacPherson Wahlahla iMaski yeGesi
Cluny MacPherson: Iminikelo kwiNzululwazi yezoNyango
Udokotela uCluny MacPherson wazalelwa eSt. John's, eNewfoundland ngo-1879.
Wafumana imfundo yakhe yonyango evela kwi-Methodist College kunye neYunivesithi yakwaMcGill. UMacPherson waqala iStg John's Ambulance Brigade emva kokusebenza noMbutho we-Ambulance yaseSt.
UMacPherson wakhonza njengegosa lonyango lokuqala kwinkunzi yokuqala yeNewfoundland ye-St John's Ambulance Brigade ngexesha leMfazwe Yehlabathi I.
Ekuphenduleni kokusetyenziswa kweGesi e-Ypres, eBelgium ngo-1915, uMacPherson waqalisa ukuphanda iindlela zokukhusela i-gasity. Kwixesha elidlulileyo, ukukhuselwa kuphela kwejoni kwakukuphefumula ngehekethi okanye enye into encinci yelinen ehlanjwe emcinini. Ngaloo nyaka, uMacPherson wasungula i-breath, okanye i-mask mask, eyenziwe yintsimbi kunye nentsimbi.
Ukusebenzisa isigqoko esithathwe kwisibanjwa saseJamani esithinjweyo, wongeza i-hood hood kunye ne-tube yokuphefumula. Isigqoko sasiphathwa ngeemichiza ezaziza kubamba i-chlorine esetyenziselwa ukuhlaselwa kwegesi. Emva kokuphuculwa okumbalwa, i-helmet ye-Macpherson yaba yimbumba yokuqala yegesi ukuze isetyenziswe ngumkhosi waseBrithani.
Ngokutsho kukaBernard Ransom, umgcini weMyuziyam yePhondo yeNyuvesi yaseNewfoundland, "uCluny Macpherson wakha isigqoko somsi womsi womzimba" kunye ne-tube ye-exhaling tube, echazwe ngamakhemikhali okwenyuka kwi-chlorine esebenza emoyeni.
Kamva, izixhobo ze-sorbent ezongezelelekileyo zongezwa ukuqhubela phambili kwesikhonkwane sakhe (i-P kunye ne-PH) ukuze anqobe ezinye iindawo zokuphefumula zamagesi ezisetyenziswa njenge-phosgene, diphosgene kunye ne-chloropicrin. Isigqoko se-Macpherson sasiyimpembelelo yokuqala yegesi emele isetyenziswe yi-British Army. "
Ukuqulunqa kwakhe kwakuyiyona nto ibalulekileyo yokukhusela iMfazwe Yehlabathi Yeyokuqala, ukukhusela amasosha amaninzi ekuphumeni, ukuphazamiseka okanye ukulimala emqaleni nasemiphungeni. Ngenxa yeenkonzo zakhe, wenza i-Companion ye-Order ka-St Michael no-St George ngo-1918.
Emva kokuxhatshazwa kwemfazwe, uMacPherson wabuyela eNewfoundland ukuba abe ngumlawuli weenkonzo zonyango zempi kwaye kamva waba ngumongameli weSt. John's Clinical Society kunye neNewfoundland Medical Association. UMacPherson wanikezelwa ezininzi iintlonipho ngeminikelo yakhe kwenzululwazi yonyango.
Imbali yeCarsh Test Dummies
Indlela iiFiber Optics ezazisungulwa ngayo
Indlela esinayo i-Bubble Gum namhlanje
Imbali ye-Concrete kunye neCement
ULloyd Augustus Hall
I-A-Wedge: Iqela leGalofu yamaNinzi amaninzi
Iingoma eziphezulu zePart 100 ze-Party zexesha lonke
I-Pro Skill Drill - Yenza I-Pool Yakho Yenziwe Ngomfanekiso
Imibuzo ephezulu ye-SAT yokuBhalisa
Amanqanaba okuLawula amaklasi aNcedo ngamnye Ootitshala mabazame
Indlela yokusebenzisa iItalian Simple Prepositions
UMargaret Beaufort, uMama kaKumkani
URichard Dwyer - "UMnu Debonair" I-Ice Skating Show Show kunye neNkcukacha yokuLuleka
Ukuthatha i-Right Right Sinker
Iimpawu zokuqala zokuqala
Iindlela ezili-6 zokusebenzisa i-Preposition "Di" ngesiTaliyane
Ellipsis (igrama kunye neempendulo)
Ingcamango ye "Whiskey eJar"
I-Movie ye-Life Life Breaker yakho-Yisiphi i-Movie? Yiyiphi Ubunjalo?
8 Iimpawu ezibonakalayo ezibonakalayo zaseTaoist
UJanet Lynn - uLuhlu lweSikolo sokuLwela i-Ice
I-Scumbling Painting Technique
I-Stockton University Admissions Facts